HomeWararka MaantaTalyaaniga Oo Dirqi Kaga Badbaaday Bulgaria
Xidiga Eder ayaa noqday halyeyga xulka qaranka Italy kadib markii weerar uu qaaday ciyaarta oo wakhtigii caadiga ahaa 6 daqiiqo ka dhiman yihiin gool ku suurto gaaliyey kaas oo ciyaarta ku soo celiyey barbaro 2-2 ah inay ku kala baxaan Italy iyo Bulgaria ciyaartii Habeenimada Sabtida ee Isreeb reebka koobka qaramada Yurub ee sanada 2016 ka.
Laacibka asal ahaan Brazil ka soo jeeda, oo bedel ku soo gallay daqiiqadii 58 aad ayaa la baxsaday Italy una dhaliyey goolka kaliya ee ay shaqaysteen, guushana ka xaaraantinimeeyey xulka Bulgaria.
Waxaa laga dhur sugayay oo indhaha oo dhami hayeen xulka uu hor kacayo Tababare Antonio Conte kuwaas oo la rajaynayay inay booska ku cidhiidhyaan oo kursi ag dhigtaan xulka hogaanka u haya Group ka H ee Croatia, waxaanay taasi dhaboobi gaadhay kadib markii bilowgii ciyaartaba ay hogaanka ku qabteen gool uu iska dhaliyey Yordan Minev.
Laakiin xulka Bulgaria ayaa uga jawaabay si dhakhso ah goolkii barbarahana keensaday kadib markii kubad uu si qurux badan u dhamaystiran Ivelin Popov daqiiqadii 11 aad , lix daqiiqo kadibna waxaabay ku dareen gool labaad oo uu shabaqa ku ruxay Iliyan Mitsanski sidaas ayaanay hogaanka ciyaarta ku hayeen tan iyo 86 aad, markaas oo uu Talyaaniga ku guntaday ciyaaryahan Eder, kulankuna wuxuu ku soo afmeermay 2-2.
Groupka H – ayaa waxaa hogaanka u haya Croatia oo 5-0 kaga takhalustay Norwey oo leh 13 dhibcood , waxaana labaad fadhiya Italy oo leh 11 dhibcood halka Norwey oo 9 dhibcood lihina kaalinta saddexaad ka fadhido.
Modric, Blind, Miranda, De Gea Iyo Laacibiinta Kale Ee Uu Ku Dhacay Xanuunka FIFA Virus
20/11/2014 Abdiwahab Ahmed
Madaxweyne Ciyaar Socota Amar Ku Bixiyey In Rigoodhayaal Loo bedelo